China Wire Rope oo leh Clips Safety ilaalinta fiilada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Linhui Hardware
Dhexroorka xadhiga siligu waa dhexroorka goobada kaas oo xidha dhamaan xidhmooyinka . Marka la cabbirayo xadhigga siliga waxaa muhiim ah in la qaado masaafada ugu weyn ee xadka bannaanka ee Crown;s ee laba xadhig oo iska soo horjeeda. Cabbirka dooxooyinka ayaa keeni doona akhrin hoose oo khaldan .
Dhexroorka 0.6-11mm dharbaaxada xadhigga xadhigga
Qalab Galvanized , birta aan lahayn
Qalabka dahaarka PVC, PU, ​​naylon, PE. daahan si weyn u kordhin kartaa nolosha shirka ee codsiga ugu
Midabka dahaarka Casaan / Jaalle / Purple/ Orange / Pink Fluorescent / Black, iwm. Laakin dahaarka hufan ayaa ah kuwa ugu caansan
Dhererka Sida looga baahan yahay
Dhammaadka qaybaha ku habboonaanta Oo ay ku jiraan boolal indhaha, isku xidhka, ilaha, jillaabyada, musqulaha, clips, joogsiga, kubbadda, calaacalaha, gacanta, isha shaabadaysan, gacan-gashi, fargeeto suunka suunka, indhaha suunka. iyo biraha dunta.
Waqtiga hogaaminta 7 maalmood haddii ay jiraan alaab ku filan kaydka
Tusaale Muunad bilaash ah ayaa la heli karaa haddii dhammaan cabbirrada ay la mid yihiin midkayada jira, haddii kale, ila soo xidhiidh, si loo helo xal hufan.
Codsiga 1.Cpressed Steel Wire Rope Sling waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo tayada ugu fiican ee tayada sare leh ee xadhigga birta ah waxaana lagu soo saaraa qalabka ugu xirfadda badan iyo farsamada 2. Samee qaadista fudud ee run. Waa badbaado iyo qalab wax lagu qaado. Sifooyinkeeda: Iska caabbinta heerkulka, sare, iyo nabarrada; fududahay in la isticmaalo oo leh culays shaqo oo weyn
3.Wedely loo isticmaalo berrinkii mishiinada, biraha, dhismaha, maraakiibta, mashruuca buundada, gymnasium, goobta saliidda, kalluumaysiga, qodista, colliery iyo dekedaha iwm
4.Shirkaddeenu waxay tafatirtay oo diyaarisay heerka qaran. Dharbaaxada xadhigga la riixay oo leh wax soo saarku wuxuu u dhexeeyaa 6mm-190mm. 5.Oo waxaan sidoo kale ka dhigi karnaa dharbaaxada la riixay ee gaarka ah sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
Tilmaamid Tixraac sawirka hoose : Dhammaan caadooyinka qeexitaannada - la sameeyay , dulqaadka adag , ayaa kor u kaca kharashka . Muunada had iyo jeer waa bilaash kaydka !
Dhexroorka Xadhkaha Xadhkaha
Hore: Breakaway Trailer Cable carabiner gariiradda lanyard
Xiga: Baabuur xadhkaha jiidaya oo culus oo qabsatooyin leh
304 Qalab aan Fiican lahayn oo Badbaado Badbaadada ah oo Dhakhso ah...
Isku-duwayaasha Cable-ka ahama-gaab
Carabiner Loop Steel Xarig
Xadhig silig galvanized ah oo leh Erayga Indho-daran...
Xarig bir ah oo leh nooca d shackle
Baabuur xadhkaha jiidaya oo culus oo qabsatooyin leh